ISIOKWU TETA! A Ihe Gbasara Ime Mgbaasị Na-amasịkarị Ndị Mmadụ
ISIOKWU TETA! A Gịnị Ka Baịbụl Kwuru Banyere Ime Mgbaasị?
WAS IT DESIGNED? Otú Aṅụ Si Efedata
IHE NDỊ GA-ENYERE EZINỤLỌ AKA Otú Ị Ga-esi Edi Ọnwụ Nne ma Ọ Bụ Nna
Mgbe Ụmụaka Na-eru Uju Nne Ha ma Ọ Bụ Nna Ha
LANDS AND PEOPLES Mgbe M Gara Spen
THE BIBLE'S VIEWPOINT Obe
Ị̀ Ga-achọ Ịmata Ihe Baịbụl Na-akụzi?
Ndị Mmụọ Ọjọọ Hà Dị Adị n’Eziokwu?
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hmong (White) Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luvale Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Oromo Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Waray-Waray Xhosa Yoruba Zulu
Teta! | Nke 2 n'Afọ 2017
Ọ bụ eziokwu na ụlọ ọrụ ndị na-emepụta fim mgbaasị na-eme ka isiokwu fim ndị ahụ na foto ndị e sere n’ihu ha na-adọrọ mmasị, ma, anyị ekwesịghị ichefu nsogbu ihe ndị a nwere ịkpatara anyị
ISIOKWU TETA! A | GỊNỊ KA BAỊBỤL KWURU BANYERE IME MGBAASỊ?
ỌTỤTỤ ndị na-ewere ya na ihe ọ bụla gbasara ndị mmụọ ọjọọ na ime mgbaasị abụghị eziokwu, na ha bụ naanị ihe ndị a na-egosi na fim. Ma, ihe Baịbụl kwuru dị iche. Ọ dọrọ anyị aka ná ntị gbasara ime mgbaasị. Dị ka ihe atụ, Diuterọnọmi 18:10-13 sịrị: “A gaghị ahụ n’etiti unu . . . onye ọ bụla nke na-agba afa, onye na-eme anwansi ma ọ bụ onye ọ bụla nke na-achọ ihe mgbaàmà ọdịnihu ma ọ bụ dibịa anwansi, ma ọ bụ onye na-akọ ndị ọzọ ọgwụ ma ọ bụ onye ọ bụla nke na-ajụ onye na-agba afa ase ma ọ bụ onye ọrụ ya bụ ịkọ ọdịnihu ma ọ bụ onye ọ bụla nke na-ajụ ndị nwụrụ anwụ ase.” Gịnị mere e ji kwuo ihe a? Akwụkwọ Nsọ sịrị: “Onye ọ bụla nke na-eme ihe ndị a bụ ihe arụ n’anya Jehova . . . Ị gaghị enwe ntụpọ n’ebe Jehova bụ́ Chineke gị nọ.”
Gịnị mere Baịbụl ji katọọ ụdị ime mgbaasị niile?
Baịbụl mere ka anyị mata na tupu Chineke ekee ụwa, o kere ọtụtụ nde ndị mmụọ ozi. (Job 38:4, 7; Mkpughe 5:11) O nyekwara mmụọ ozi nke ọ bụla ikike ịhọrọ ime ihe ọma ma ọ bu ihe ọjọọ. Ụfọdụ n’ime ndị mmụọ ozi a họọrọ inupụrụ Chineke isi, si n’eluigwe gbadata n’ụwa, bịa na-akpata ọgba aghara. Ihe a mere ka ụwa “jupụta n’ime ihe ike.”—Jenesis 6:2-5, 11; Jud 6.
Baịbụl gwara anyị na ndị mmụọ ọjọọ a nwere ikike dị egwu. Ha ejirikwala ikike a duhie ọtụtụ nde mmadụ. (Mkpughe 12:9) Ha na-ejikwa mmasị ndị mmadụ nwere n’ịmata ọdịnihu eduhie ọtụtụ ndị.—1 Samuel 28:5, 7; 1 Timoti 4:1.
N’eziokwu, e nwere mgbe ụfọdụ ndị mmụọ ọjọọ na-emere ndị mmadụ ihe ọma. (2 Ndị Kọrịnt 11:14) Ma, nke bụ́ eziokwu bụ na ndị mmụọ ọjọọ na-agbalị imegharị ndị mmadụ anya ka ha ghara ịmata eziokwu banyere Chineke.—2 Ndị Kọrịnt 4:4.
Baịbụl kwuru na mmadụ na ndị mmụọ ọjọọ imekọrịta ihe abụghị ihe egwuregwu. Mgbe e mere ka ndị na-eme anwansi chọrọ ịghọ ndị na-eso ụzọ Jizọs ghọta na mmadụ na ndị mmụọ ọjọọ imekọrịta ihe adịghị mma, ha “chịkọtara akwụkwọ ha ma kpọọ ha ọkụ” n’agbanyeghị na ha ji nnukwu ego zụọ ha.—Ọrụ Ndịozi 19:19.
“Ihe o nwere ike ịbụ ya kpatara ọtụtụ ụmụ nwaanyị ndị na-eto eto ji na-enwezi mmasị na mgbaasị ga-abụ otú e sizi na-eme ka ndị amusu maa mma na tiivi, fim, nakwa n’akwụkwọ.”—Gallup Youth Survey, 2014
Taakwa, ọtụtụ ndị ekpebiela iwepụ aka ná ntụrụndụ ọ bụla ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ nwere ihe jikọrọ ya na mgbaasị. Dị ka ihe atụ, mgbe Maria * dị afọ iri na abụọ, ọ na-enwe ike ikwu ihe ga-eme n’ọdịnihu, ma ọ bụ ikwu nsogbu na-abịanụ. Ọ na-agụrụ ụmụ klas ya kaadị tarọt. Ebe ọ bụ na ihe ọ bụla ọ gwara ha na-eme, o mere ka ọ bamikwuo n’ime mgbaasị.
Maria chere na ọ bụ Chineke nyere ya ikike ime ihe ndị a iji nyere ndị mmadụ aka. Ọ sịrị: “Ma, o nwere ihe nọ na-enye m nsogbu n’obi. Ọ bụ ndị ọzọ ka m na-eji kaadị ndị ahụ akọrọ ọdịnihu ha. Anaghị m enwe ike iji ha akọ ọdịnihu nke m, ma ọ na-agụsi m agụụ ike ịmata ọdịnihu m.”
Maria kpere ekpere maka ọtụtụ ihe na-agba ya gharịị. Ndịàmà Jehova mechara bido mụwara ya Baịbụl. Maria mụtara na ikike o ji na-akọ ọdịnihu esighị n’ebe Chineke nọ. Ọ mụtakwara na ndị niile chọrọ ka ha na Chineke dịrị ná mma ga-ebibi ihe ọ bụla e ji eme mgbaasị ha nwere. (1 Ndị Kọrịnt 10:21) Gịnị mechara mee? Maria tụfuru akwụkwọ na ihe ndị ọzọ niile o ji eme mgbaasị. Ugbu a, ọ na-akọziri ndị ọzọ eziokwu ndị ọ mụtara na Baịbụl.
Mgbe Michael ka bụ onye na-eto eto, o nwere ezigbo mmasị n’ịgụ akwụkwọ ndị a kọrọ gbasara ndị ji ike ndị mmụọ ọjọọ na-akpa ike. Ọ sịrị: “Ọ na-amasị m ịdị ka ndị ọgbọ m m gụrụ gbasara ha n’akwụkwọ ndị ahụ.” Ntakịrị ntakịrị, Michael bidoro ịna-agụ akwụkwọ mgbaasị na akwụkwọ ndị òtù ọjọọ. Michael kwuru, sị: “M bidoro inwe mmasị n’akwụkwọ na fim mgbaasị n’ihi na m chọrọ ịmata ihe dị na ha.”
Mgbe Michael bidoro mụwa Baịbụl, ọ matara na ya kwesịrị ichebara ụdị akwụkwọ ndị ọ na-agụ echiche. Ọ sịrị: “Eji m akwụkwọ depụta ihe niile gbasara mgbaasị m nwere ma bibie ha. M mụtakwara ihe ná 1 Ndị Kọrịnt 10:31. Ebe ahụ sịrị: ‘Na-emenụ ihe niile iji nye Chineke otuto.’ M gụwa akwụkwọ ọ bụla ugbu a, ajụjụ m na-ajụzi onwe m bụ, ‘Ihe a m na-agụ n’akwụkwọ a ọ̀ ga-eme ka m bido ime ihe na-agaghị ewetara Chineke otuto?’ Ọ bụrụ otú ahụ, m na-akwụsị ịgụ ya.”
Nkọwa ahụ akọwara Baịbụl ka oriọna dabara adaba n’ihi na ọ na-enye ìhè na-eme ka mmadụ mata na ime mgbaasị enweghị uru ọ bara. (Abụ Ọma 119:105) Ma, o nwekwara ihe ndị ọzọ Baịbụl kwuru. O mere ka anyị mata banyere nkwa magburu onwe ya Chineke kwere banyere ụwa ndị mmụọ ọjọọ na-agaghị anọ na ya. Uru ọ ga-abara ụmụ mmadụ karịrị akarị. Dị ka ihe atụ, Abụ Ọma 37:10, 11 kwuru, sị: “N’oge na-adịghị anya, onye ajọ omume agakwaghị anọ; ị ga-elekwa anya n’ebe ọ na-anọ, ma ọ gaghị anọ ya. Ma ndị dị umeala n’obi ga-enweta ụwa, ha ga-enwekwa obi ụtọ dị ukwuu n’ihi udo nke zuru ebe niile.”
^ para. 10 Aha a kpọrọ ndị mmadụ n’isiokwu a abụghị ezigbo aha ha.
Gịnị Bụ Mgbaasị?
Ihe na-egosi na mmadụ nwere mmasị n’ime mgbaasị bụ ma ọ bụrụ na onye ahụ na-etinye aka n’ihe ndị dị ka ịgụ kpakpando, iri amusu, na ime anwansi. N’ọtụtụ ebe n’ụwa, ndị mmadụ na-esi n’aka ndị dibịa afa na-achọ ụzọ ha na ndị mmụọ ọjọọ ga-esi na-ekwurịta okwu. Ụfọdụ na-agba afa iji mata ọdịnihu. Ha na-agụ kpakpando, na-achọ ihe mgbaàmà dị iche iche, na-ele crystal ball, na-ele akara aka ndị ọzọ ma ọ bụkwanụ gaa ka ndị ọzọ lee nke ha.
Akwụkwọ, magazin, na fim dị iche iche na-eme ka mgbaasị yie ihe na-adịghị njọ na ihe na-atọ ụtọ. Ụfọdụ ndị ọkachamara ekwuola na otú e sizi na-egosi ihe gbasara ndị mmụọ ọjọọ na tiivi na fim emeela ka ọtụtụ ndị na-elezi ha anya ọma.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu ihe Baịbụl kwuru gbasara mgbaasị, gụọ isi nke 10 n’akwụkwọ bụ́ Gịnị Ka Baịbụl Na-akụziri Anyị? Ọ bụ Ndịàmà Jehova bipụtara ya. I nwekwara ike ịhụ ya na jw.org/ig.
Nke 2 n'Afọ 2017 | Gịnị Ka Baịbụl Kwuru Banyere Ime Mgbaasị?
TETA! Nke 2 n'Afọ 2017 | Gịnị Ka Baịbụl Kwuru Banyere Ime Mgbaasị?
Ekwela Ka Ndị Mmụọ Ọjọọ Ghọgbuo Gị!